Nhau - KUSVIRA KUTAURA KWENYANZVI CHISIMBISO KUKUNDIKANA KWECENTRIFUGAL PUMP
Centrifugal pombi yekudzima inonyanya kukonzerwa nekutadza kwechimakanika chisimbiso. Kukundikana kwekuita kwakawanda kwekudonha, izvo zvikonzero zvekudonha kunotevera:
Atic inofambira mberi uye ine simba mhete chisimbiso pamusoro pekudonha, zvikonzero zvikuru ndezvekuti: yekupedzisira ndege flatness, roughness haina kusangana nezvinodiwa, kana kukwenya kwepamusoro; pakati pekuguma kwechinhu chakaperera, zvichikonzera kumagumo ese ari maviri haakwanise kumhanya zvakafanana. kuisirwa hakusi munzvimbo, nzira yacho haina kunaka.
② muripo mhete chisimbiso leakage, zvikonzero zvikuru ndezvekuti: gland deformation, preload haisi yunifomu; kuisirwa hakuna kunaka; chisimbiso mhando hachisvike chiyero; chisimbiso chisarudzo hachina kunaka.
Iko kushandisa chaiko kwemhedzisiro kunoratidza kuti akanyanya kutadza zvikamu zveiyo yekuisa chisimbiso chinhu chiri kufamba uye yakamira mhete yekupedzisira, centrifugal pombi yekuisa chisimbiso, yakamira mhete kuguma kwekutsemuka chinhu chakajairika kutadza chiitiko, zvikonzero zvikuru ndezvekuti: ganga rakanyanya kukura, Iyo sukurudza mvura inonoka kutora kupisa kunogadzirwa neiyi kukakavara vaviri chinoyerera chinoyerera chinodonha kubva pakavhara pevhu pakakoromoka, zvichikonzera kumeso kumeso kupisa uye kukuvara.
② yemvura midhiya vaporization kuwedzera, kuitira kuti ese magumo nekupisa kwekuwedzera kwesimba uye akapatsanurwa, kana iwo maviri ekuisa chisimbiso pamusoro akamanikidzwa kukwana, kukuvadza iyo lubricating firimu uye nekudaro inokonzeresa pamusoro pechiso kupisa.
③ yakashata emvura midhiya lubrication, pamwe neanoshanda anodzvinyirira kuwanda, maviri akavharidzirwa pamusoro yekutevera kutenderera haina kuwiriraniswa. Semuenzaniso, iyo yekumhanyisa yekumhanyisa pombi kumhanya iri 20445r / min, iyo yekumisikidza pamusoro wepakati dhayamita ndeye 7cm, iyo pombi yekumhanyisa mushure memutsetse kumhanyisa kusvika 75m / s, kana paine chisimbiso pamusoro pemvura isingakwanise kuteedzera kutenderera, pakarepo tembiricha yakakwira inokonzerwa nekuisa chisimbiso pamusoro pekukuvara.
Post nguva: Apr-13-2020